"လူငယ်တိုင်းရှိထားသင့်တဲ့ အရည်အချင်း (၈) ခု"
ပညာရှာတဲ့ အသကျအရှယျ ကြျောလှနျလာတဲ့ အခါ လုပျငနျးခှငျ ဝငျကွရမှာဖွဈပါတယျ။ လုပျငနျခှငျ ဝငျရငျးနဲ့ ထပျလလေ့ာ တာတှကွေတော့ လဲ တမြိုးပေါ့။
ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ဘယျသူမဆို လုပျငနျးခှငျ ဝငျတဲ့ အခါ အရညျအခငျြးတှေ အမြားကွီး လိုအပျအပျပါတယျ။ ကိုယျလုပျမယျ့ အလုပျက ပိုမွငျ့လအေရညျအခငျြး မြားမြား ပိုလိုလပေါပဲ။
Hard Skill တှကေတော့ ကိုယျလုပျမယျ့ အလုပျပျေါမူတညျပွီးရှိရမှာဖွဈပွီး Soft Skill ကတော့ ဘယျလုပျငနျးမှာမဆို ရှိဖို့လိုအပျတဲ့ အရညျအခငျြးတှပေါပဲ။ ဒါကွောငျ့ လုပျငနျးခှငျ ဝငျတဲ့ အခါ မဖွဈမနရှေိသငျ့ တဲ့ အရညျအခငျြး ၈ ခုကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး အရညျအခငျြး (Communication)
ဒါကတော့ လုပျငနျးခှငျ တဈခုမှာ အရမျးအရေးကွီးတဲ့ အရညျအခငျြးတှထေဲက တဈခုပါ။ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှေ၊ ကိုယျအထကျလူကွီးတှနေဲ့ဆကျဆံရမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ အရမျးကို အရေး ကွီးပါတယျ။ sale and marketing သမားတှဆေို ပိုလို့တောငျ အရေးကွီးပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ အငျတာဗြူး စဖွတေညျးက သငျဘယျလောကျ ပေါငျးသငျးဆကျဆံ ရေးကောငျးကွောငျးဖျောပွပါ။
(၂) ပူပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျမှု အရညျအခငျြး (Teamwork)
ဟုတျပါတယျ….လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ Teamwork ကလညျး အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။ Teamwork ရှိမှ အလုပျတှကေို တှငျတှငျကယျြကယျြ လုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တဈကိုယျကောငျးဆနျလို့မရပါဘူး။ Teamwork ဆိုတဲ့ အထဲ မှာ မိမိ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို စီမံခနျ့ခှဲနိုငျမှုနဲ့ ကိုယျတိုငျတာဝနျယူ သိတတျမှုတှလေဲ ပါဝငျပါတယျ။ လုပျငနျးတဈခု မြျောလငျ့ထားတဲ့ နရောရောကျဖို့နဲ့ အောငျမွငျမှုရဖို့အတှကျ တဈယောကျခငျြးစီမှာ Teamwork ကလညျး အရမျးကိုအရေးကွီးတဲ့ အရာတဈခုပါ။
(၃) ပွဿနာဖွရှေငျးခွငျး (Problem Solving)
ပွဿနာဖွရှေငျး နိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးဆိုတာကတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ ကိုယျ့ ဘကျကမှားတာပဲ ဖွဈဖွဈ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အရာတှကေို ရှုထောငျ့ အမြိူးမြိုး ကကွညျ့ပွီး ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးကိုဆို လိုတာပါ။
ဒါဟာလညျး လုပျငနျးခှငျ ဝငျမယျ့ မညျသူမဆို ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ အရညျအခငျြးတဈခုပါပဲ။
(၄) ခေါငျးဆောငျမှု အရညျအခငျြး (Leadership)
ခေါငျးဆောငျမှု အရညျအခငျြးဆိုတာနဲ့ လုပျငနျးတဈခုရဲ့ ခေါငျးဆောငျပိုငျး မှမဟုတျပဲ ဝနျထမျးတိုငျးရှိထားသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြပါ။ ဆိုလိုခငျြတာ က အခွေ ခံ ဝနျထမျးဆို မိမိရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို လှုံ့ဆျောမယျ၊ စိတျအားတကျကွှအောငျ လုပျမယျ(ဥပမာ - မငျးကတော့ ဒီအပိုငျးတာဝနျယူလိုကျ၊ ငါကတော့ ဒါကို တာဝနျယူလိုကျမယျ) အဲ့လိုမြိုး စီမံ ခနျ့ခှဲ နိုငျတာတှကေို လညျး ခေါငျးဆောငျမှု အရညျအခငျြးလိုကပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအရညျအခငျြးကလညျးမဖွဈမနရှေိထားသငျ့ပါတယျ။
(၅) အခြိနျစီမံခနျ့ခှဲနိုငျခွငျး (Time Management)
ကြှနျတျော လညျးအစက လုပျငနျးခှငျ မှာ Time Management ကအဲ့လောကျအရေးမကွီး ဘူးထငျခဲ့တာ(ကိုယျ့အမွငျပေါ့)။ ကိုယျတနတေ့ာ လုပျရမယျ့ အလုပျတှကေို ပွီးအောငျလုပျနိုငျရငျတာဝနျကွပွေီပေါ့။ အဲ့ဒါကလညျး မှနျတော့မှနျပမေယျ့ တကယျတမျးမှာ သငျ့ရဲ့ အလုပျနဲ့ အခြိနျတှကေို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျရငျ သငျ့ရဲ့ အလုပျမှာ ထိထိရောကျရောကျတိုးတကျမှုရှိတာကို သငျသတိထားမိမှာပါ။ သငျ့လုပျရမယျ့တာဝနျတှနေဲ့ အခြိနျကိုကောငျးစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးကလညျး အလုပျရှငိတှကွေိုကျနှဈသကျတဲ့ အရညျအခငျြးတှထေဲ ကတဈခုပါပဲ။
(၆) ဖိအားတှအေောကျမှာ အလုပျလုပျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြး (Ability to work under pressure)
ဘယျအလုပျမဆို ဖိအားရှိပါတယျ။ ဥပမာ ဒီလတော့ ဘယျလောကျ Target ပွညျ့ရမယျ။ ဘယျရကျမှာ အလုပျတှပွေီး ရမယျ.. အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။ သူမြားအလုပျမှာ လုပျနရေတာဖွဈတဲ့အတှကျ အလုပျရှငျကတော့ လုပျငနျးတိုးတကျအောငျဖိအားပေးမှာပဲလေ။ ဒါ့အပွငျ တခွား ဖိအားတှလေညျးရှိသေးတာပေါ့။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဖိအားတှအေောကျမှာ မညညျးမညူ လကျမလြော့ပဲ အလုပျလုပျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။
(၇) ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှု (Self-confidence)
ဒီအခကျြကတော့ အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။ လုပျငနျးခှငျမှာ မဟုတျပဲ တခွားဘယျနရေမှာ မဆို မိမိကိုယျ မိမိ ယုံကွညျမှုရှိဖို့အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ သငျဟာ လူတှနေဲ့စကားပွောရတာကွောကျနမေယျ၊ ပှဲထှကျရတာ ကွောကျနမေယျဆိုရငျတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ အဆငျပွမှော မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မိမိကိုယျမိမိ ယုံကွညျမှုရှိဖို့အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
(၈) ထီထှငျဆနျးသဈနိုငျမှု (Creativity)
လုပျငနျးတှေ စီးပှားရေးတှေ အပွိုငျအဆိုငျမြားနတေဲ့ ဒီလိုခတျေကွီးမှာ လုပျငနျးအတှကျ သငျ့ရဲ့ အကွံဉာဏျဆနျးသဈမှုတှေ၊ တီထှငျဆနျးသဈနိုငျမှုတှကေလညျး အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။ ဒီလိုအရညျအခငျြးမြိုး ကလုပျငနျးရှငျတှေ သဘောကတြဲ့ အရညျအခငျြးတှထေဲ ကတဈခုပါပဲ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တာတှကေတော့ လုပျငနျးခှငျဝငျမယျ့ လူငယျတိုငျးရှိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ လိုအပျတဲ့ အခကျြ တှရှေရငျလညျး ဖွညျ့ပေးကွပါလို့ပွောကွားရငျး….
အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား သင်ကြားပေးသော Guide ဆရာ၊ ဆရာမများ >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-496.html
ပညာရှာတဲ့ အသက်အရွယ် ကျော်လွန်လာတဲ့ အခါ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်ခွင် ဝင်ရင်းနဲ့ ထပ်လေ့လာ တာတွေကြတော့ လဲ တမျိုးပေါ့။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို လုပ်ငန်းခွင် ဝင်တဲ့ အခါ အရည်အချင်းတွေ အများကြီး လိုအပ်အပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်က ပိုမြင့်လေအရည်အချင်း များများ ပိုလိုလေပါပဲ။
Hard Skill တွေကတော့ ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးရှိရမှာဖြစ်ပြီး Soft Skill ကတော့ ဘယ်လုပ်ငန်းမှာမဆို ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်တဲ့ အခါ မဖြစ်မနေရှိသင့် တဲ့ အရည်အချင်း ၈ ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အရည်အချင်း (Communication)
ဒါကတော့ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုမှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ၊ ကိုယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းကို အရေး ကြီးပါတယ်။ sale and marketing သမားတွေဆို ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာဗျူး စဖြေတည်းက သင်ဘယ်လောက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေးကောင်းကြောင်းဖော်ပြပါ။
(၂) ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အရည်အချင်း (Teamwork)
ဟုတ်ပါတယ်….လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ Teamwork ကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ Teamwork ရှိမှ အလုပ်တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လို့မရပါဘူး။ Teamwork ဆိုတဲ့ အထဲ မှာ မိမိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနဲ့ ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူ သိတတ်မှုတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု မျော်လင့်ထားတဲ့ နေရာရောက်ဖို့နဲ့ အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ Teamwork ကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
(၃) ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း (Problem Solving)
ပြဿနာဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ အ၇ည်အချင်းဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့် ဘက်ကမှားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေကို ရှုထောင့် အမျိူးမျိုး ကကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကိုဆို လိုတာပါ။
ဒါဟာလည်း လုပ်ငန်းခွင် ဝင်မယ့် မည်သူမဆို ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ။
(၄) ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်း (Leadership)
ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းဆိုတာနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့  ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မှမဟုတ်ပဲ ဝန်ထမ်းတိုင်းရှိထားသင့်တဲ့ အရည်အချင်ပါ။ ဆိုလိုချင်တာ က အခြေ ခံ ဝန်ထမ်းဆို မိမိရဲ့  လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို လှုံ့ဆော်မယ်၊ စိတ်အားတက်ကြွအောင် လုပ်မယ်(ဥပမာ - မင်းကတော့ ဒီအပိုင်းတာဝန်ယူလိုက်၊ ငါကတော့ ဒါကို တာဝန်ယူလိုက်မယ်) အဲ့လိုမျိုး စီမံ ခန့်ခွဲ နိုင်တာတွေကို လည်း ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းလိုကပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအရည်အချင်းကလည်းမဖြစ်မနေရှိထားသင့်ပါတယ်။
(၅) အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း (Time Management)
ကျွန်တော် လည်းအစက လုပ်ငန်းခွင် မှာ Time Management ကအဲ့လောက်အရေးမကြီး ဘူးထင်ခဲ့တာ(ကိုယ့်အမြင်ပေါ့)။ ကိုယ်တနေ့တာ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ရင်တာဝန်ကြေပြီပေါ့။ အဲ့ဒါကလည်း မှန်တော့မှန်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ သင့်ရဲ့ အလုပ်နဲ့ အချိန်တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရင် သင့်ရဲ့ အလုပ်မှာ ထိထိရောက်ရောက်တိုးတက်မှုရှိတာကို သင်သတိထားမိမှာပါ။ သင့်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေနဲ့ အချိန်ကိုကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကလည်း အလုပ်ရှငိတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲ ကတစ်ခုပါပဲ။
(၆) ဖိအားတွေအောက်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း (Ability to work under pressure)
ဘယ်အလုပ်မဆို ဖိအားရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဒီလတော့ ဘယ်လောက် Target ပြည့်ရမယ်။ ဘယ်ရက်မှာ အလုပ်တွေပြီး ရမယ်.. အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ သူများအလုပ်မှာ လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ရှင်ကတော့ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်ဖိအားပေးမှာပဲလေ။ ဒါ့အပြင် တခြား ဖိအားတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖိအားတွေအောက်မှာ မညည်းမညူ လက်မလျော့ပဲ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၇) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု (Self-confidence)
ဒီအချက်ကတော့ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မဟုတ်ပဲ တခြားဘယ်နေရမှာ မဆို မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှုရှိဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်ဟာ လူတွေနဲ့စကားပြောရတာကြောက်နေမယ်၊ ပွဲထွက်ရတာ ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
(၈) ထီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှု (Creativity)
လုပ်ငန်းတွေ စီးပွားရေးတွေ အပြိုင်အဆိုင်များနေတဲ့ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ လုပ်ငန်းအတွက် သင့်ရဲ့ အကြံဉာဏ်ဆန်းသစ်မှုတွေ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှုတွေကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုး ကလုပ်ငန်းရှင်တွေ သဘောကျတဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲ ကတစ်ခုပါပဲ။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့် လူငယ်တိုင်းရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက် တွေရှရင်လည်း ဖြည့်ပေးကြပါလို့ပြောကြားရင်း….
အင်ျဂလိပျ ဘာသာ စကား သငျကွားပေးသော Guide ဆရာ၊ ဆရာမမြား >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-496.html
young people must have these qualification